Medical Writings ဆေးပညာစာများ: High hemoglobin သွေးအားများရောဂါ
Wed, Oct 31, 2012 at 9:42 PM
ဆေးစစ်ချက်အရ (ဟေမိုဂလိုဘင်) များလို့ ဆိုပြီး သွေးနှစ်အိတ်လည်း ဖောက်ထုတ်ထားပါတယ်ဆရာ။
လူတွေမှာ သွေးကနီရဲနေတာဟာ (ဟီမိုဂလိုဘင်) ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ သံဓါတ်သုံးပြီးတည်ဆောက်ထားတယ်။ သံဓါတ်နည်းရင် Anemia သွေးအားနည်းတာလို့ အများကသိကြတယ်။ အခုမေးတဲ့သူမှာ ပြောင်းပြန် ပုံမှန်ထက်များနေတယ်။
(ဟီမိုဂလိုဘင်) ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ အသက်၊ ကျား-မ အရမတူကြဘူး။
• မွေးကာစကလေး =17-22 gm/dl
• ၇ ရက်အရွယ်ကလေး = 15-20 gm/dl
• တလသားကလေး = 11-15gm/dl
• ကလေးအရွယ် = 11-13 gm/dl
• လူကြီး ယောက်ျား = 14-18 gm/dl
• လူကြီး မိန်းမ = 12-16 gm/dl
• အသက်ကြီး ယောက်ျား = 12.4-14.9 gm/dl
• အသက်ကြီး မိန်းမ = 11.7-13.8 gm/dl
ဒီအခြေအနေတွေမှာ (ဟီမိုဂလိုဘင်) ရှိသင့်တာထက်နည်းမယ်။
1. Anemia (အနီးမီးယား) သွေးအားနည်းခြင်း = (ဟီမိုဂလိုဘင်) နည်းခြင်း၊
2. Erythropoietin deficiency = (ဟီမိုဂလိုဘင်) ချို့ယွင်းခြင်း (ကျောက်ကပ်ရောဂါ)၊
3. Blood transfusion = သွေးသွင်းရာမှ သွေးနီဥပျက်စီးခြင်း၊
4. Bleeding = သွေးယိုခြင်း
5. Lead poisoning = ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း၊
6. Malnutrition = အစာအာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊
7. Iron, Folate, Vitamin B-12, B-6 deficiencies = သွေးတည်ဆောက်ဘို့လိုတဲ့ဓါတ်တွေချို့ယွင်းခြင်း၊
8. Over hydration = ရေဓါတ်လွန်ကဲခြင်း။
ဒီအခြေအနေတွေမှာ (ဟီမိုဂလိုဘင်) ရှိသင့်တာထက်များနေမယ်။
• ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ (ဟီမိုဂလိုဘင်)၊
• မြင့်ရာအရပ်မှာနေထိုင်ခြင်း၊ လေထဲမယ် အောက်စီဂျင်နည်းနေတယ်။
• Polycythemia vera = သွေးဥလွန်ကဲခြင်း (ပေါ်လီဆိုက်သီးမီးယား-ဗာရာ)၊
• Cor pulmonale အဆုပ်ရောဂါတမျိုး (ကော်-ပါလ်မိုနယ်လေး)၊ သွေးတိုးကြောင့် နှလုံးညာဘက်ခန်းတွေ အလုပ်မနိုင်ဖြစ်ခြင်း
• Pulmonary fibrosis အဆုပ်ရောဂါတမျိုး (ပါလ်မိုနရီ-ဖိုက်ဘရိုးဆစ်)၊
• Anabolic steroid (စတီရွိုက်) ဆေးသုံးခြင်း။
(ဟီမိုဂလိုဘင်) ရှိသင့်တာထက်များနေခြင်းဟာ နည်းလမ်း ၂ ခုကနေဖြစ်စေတယ်။
၁။ သွေးနီဥတွေ ထုတ်လုပ်တာ လွန်ကဲခြင်း၊ သွေးကနေ အောက်စီဂျင်ကို သယ်ယူနိုင်စွမ်းနည်းလို့ အလျှင်မီအောင် ထုတ်ပေးနေလို့ ဖြစ်ရတယ်။ (ဆပ်ပလိုင်း-ဒီမန်) သဘောအရလို့ပြောနိုင်တယ်။
၂။ သွေးရည်ကြည်က နည်းနေလို့ သွေးနီဥကယှဉ်ကြည့်ရင် များတာ၊ နှိုင်းရအများလို့ ပြောမယ်။
Hematocrit = <0.50 (Hemoglobin value of 160 g/L) ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဓိကအားဖြင့် သွေးခဲပြဿနာဖြစ်တယ်။ (ဟီမိုဂလိုဘင်) ရှိသင့်တာထက်များနေရင် သွေးပျစ်ခြင်းကြောင့် ဒါတွေ ခံစားရနိုင်တယ်။
(၁) Peripheral cyanosis ခြေဖျား-လက်ဖျားပြာနှမ်းလာခြင်း၊
(၂) impaired mental function စိတ်ပိုင်အလုပ်လျှော့နည်းလာခြင်း၊ Impaired Mental Function ဆိုတာ Dysfunctional cognition အသိဥာဏ်နည်းခြင်း၊ Dizziness မူးဝေခြင်း၊ Mental confusion စိတ်ရှုတ်ထွေးခြင်း၊
(၃) Thrombo-embolism သွေးခဲပိတ်ခြင်းဖြစ်တာ သူများထက် သိသိသာသာများတယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ရောင်မယ်၊ ထုံမယ်၊ အမြင်-အကြားချို့ယွင်းမယ်။
ဘယ်လိုကုသမလဲ ဒီလိုဖြစ်တာကို ရောဂါကြီးရယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါ။ ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်ကိုလဲ ကုသတယ်။ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေကိုလဲ ကုသပေးရတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 10:15 AM